सोलुखुम्बुमा माओबादी केन्द्रको को–को उम्मेद्धार ? – Himal FM 90.2 MHz
सोलुखुम्बुमा माओबादी केन्द्रको को–को उम्मेद्धार ?
सोलुखुम्बु, १७ जेठ,
नेकपा माओवादी केन्द्रले सोलुखुम्बुको स्थानीय तहमा उम्मेद्धार टुंगो लगाएको छ । एक नगरपालीका र ७ वटै गाउँपालीकामा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्धार टुंगो लगाएको हो ।
माओवादीले सवै स्थानीय तहमा सहमतीबाट उमेद्धारको टुंगो लगाएको माओवादी केन्द्र सोलुखुम्बुका प्रचार विभाग प्रमुख धु्रव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । ५२ वडा रहेको सोलुखुम्बुमा माओवादी केन्द्रले सवै वडाका लागि अध्यक्षको नाम पनि टुंग्याएको छ ।
सवै स्थानीय तहमा उमेद्धार टुंग्याएको माओवादीले दुधकोसी गाउँपालीका र नेचा सल्यान गाउँपालीकाको उपाध्यक्षको नाम भने टुंग्याउन बाँकी छ । सोलुखुम्बुमा उम्मेदवार टुंगो लगाउनेमा माोवादी अघि रहेको छ । माओवादीले सोलुदुधकुण्ड नगरपालीकाको मेयरमा निमातुण्डु शेर्पा र उपमेयरमा ङिमा ग्येल्मु शेर्पा उम्मेद्वार बनाएको छ ।
दुधकौशिका गाउँपालीकाको अध्यक्षमा असिम राई र उपाध्यक्षमा मेनुका पुरी झरनालाई अघि सारिएको छ । सोताङ गाउँपालीकामा अध्यक्ष सहिमान राई, उपाध्यक्ष तारा राई शेर्पा, माहाकुलुंङ गाउँपालीका अध्यक्षमा सागर किराती र उपाध्यक्षमा भरना राईको नाम टुंग्याईएको छ । दुधकोसी गाउँपालीकामा आस कुमार राई र उपाध्यक्ष भने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ ।
खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालीकामा अध्यक्ष नाम्गेल शेर्पा र उपाध्यक्षमा फु शेर्पा, लिखुपिके गाउँपालीकामा अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेत तथा उपाध्यक्षमा सर्मिला बस्नेत र नेचा सल्यान गाउँपालीकामा केशर बाहिङ राईको नाम टुंगो लगाईएको छ । सोहि गाउँपालीकामा उपाध्यक्ष चयन गर्न बाँकी रहेको छ । दुधकोसी गाउँपालीका र नेचा सल्यान गाउँपालीकाको उपाध्यक्षको नाम २–३ भित्रमा टुंगो लाग्ने प्रचार विभाग प्रमुख पराजुलीको भनाई छ ।